ကိုလက်စထရောပါဝင်မှုများတဲ့ အစားအစာ – Healthy Life Journal
Q. အခုတလော ကိုလက်စထရော တက်တဲ့သူတွေ များနေပါတယ်။ အစားအသောက်ကြောင့်လား။ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေထဲမှာ ကိုလက်စထ ရောပါဝင်မှုများတတ်ပါသလဲ။ ပြောပြပေးပါခင်ဗျား။
A. ကိုလက်စထရောကတော့ ဟင်းအနှစ်တွေမှာ ပါတာများပါတယ်။ ကြက်ဥ၊ အသည်း၊ ငါးဥ၊ ဒိန်ခဲ စတာတွေမှာလည်း ပါပါတယ်။ ပုစွန်အသားကတော့ စားလို့ရပါတယ်။ ပုစွန်ခေါင်းကတော့ ကိုလက်စထရော များတဲ့အတွက် လျှော့စားပါ။ နွားနို့ကိုကျတော့ နှလုံးရောဂါရှိတဲ့သူတွေ မသောက်ရဲဘူးလို့ လာပြောတာရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ ဘာမှမဆိုင်ပါဘူး။ နွားနို့က ကိုလက်စထရော သိပ်မတက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ စိတ်မချဘူး၊ ကိုလက်စထရောတက်မှာ ကြောက်တယ်ဆိုရင် နွားနို့တည်ပြီးတဲ့အခါ အပေါ်မှာတက်လာတဲ့ မလိုင်တွေကိုဖယ်ပြီး သောက်နိုင်ပါတယ်။ အခွံမာအစေ့အဆန်တွေကိုလည်း စားပေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကောင်းတဲ့ကိုလက်စထရောလို့ခေါ်တဲ့ HDL တွေရရှိစေလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အများကြီးစားဖို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နေ့တိုင်းတော့ စားပေးသင့်ပါတယ်။ မြေပဲဆိုလည်း ဆယ်စေ့၊ သီဟိုဠ်စေ့ဆို ခြောက်စေ့လောက်ပဲ စားသင့်ပါတယ်။ နေကြာစေ့၊ ဖရုံစေ့ဆိုလည်း လက်တစ်ဆုပ်ပေါ့။ နေ့တိုင်း အခွံမာအစေ့အဆန်တွေ စားဖို့ပြောတိုင်း အများကြီး စားလို့မရပါဘူး။ ချင့်ချိန်ပြီး စားဖို့လိုပါတယ်။
သစ်သီးကို တစ်နေ့တစ်လုံးလောက်တော့ စားဖြစ်အောင်စားပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး၊ မုန်လာဥနီ၊ မုန်ညင်းထုပ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီ၊ တိုဟူးစတာတွေကိုလည်း နေ့တိုင်းစားဖို့လိုပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း စားသောက်ဆိုင်တွေကို သွားစားတာများပါတယ်။ စားသောက်ဆိုင်မှာ အစားအသောက်တွေမှာတဲ့အခါ အဆီမများတာတွေ၊ အငန်လျှော့ရမယ်၊ အချိုမှုန့်မထည့်တာမျိုး ပြောရပါမယ်။ နောက်ပြီး ခပ်ဖြည်းဖြည်းပဲ စားပါ။ ကြော်တဲ့အစာတွေ အစားပေါင်းထားတာ၊ ပြုတ်ထားတာတွေ စားပါ။ ဗိုက်ပြည့်သွားရင် နှမြောလို့ဆိုပြီး မရမကမစားပါနဲ့။ ပါဆယ်ထုတ်သွားလိုက်ပါ။ အိမ်ရှင်မတော်တော်များများက နှမြောစာတွေစားရင်း ဝလာကြတာများပါတယ်။ မလုပ်ပါနဲ့။ မစားနိုင်ရင် ထပ်မစားတာကောင်းပါတယ်။
Related Items:Cholesterol, Foods, healthy